Iimaski zamadoda-Imfashini yamadoda eneSimbo | Amadoda aQinisekileyo
Sijongene nemeko engxamisekileyo yezempilo kwaye sicebisa ukusetyenziswa kweemaski njengenyathelo lokhuseleko kunye nokugcina intsholongwane ye-covid-19. Kungenxa yoko kufuneka sisebenzise imaski ukuvala umlomo kunye nempumlo kunye nokunciphisa ukusasazeka kwezifo.
Uninzi lweemveliso zeempahla kunye nezixhobo zokuyila zikhethe ukufikelela kwinjongo enye, Uyilo lomlomo lugubungela uyilo oluhle ngaphandle kokulibala umxholo wokukhusela kunye nentuthuzelo.
Kukho iimaski ezingenakubalwa kwintengiso, esinazo ezilahlwayo, ukuya kwezo zinokusetyenziswa kwakhona ngokwenza uhlamba oluninzi. Ezinokuphinda zisebenze zizinikele ekubeni zenziwe ngezinto ezisemgangathweni ophezulu, ngakumbi ukuba zinokuphefumla kwaye zomelele kakhulu.
Ungalibali ukuba bonke bazama ukufikelela kwinjongo enye, abayenzayo esona sithintelo silungileyo ngelaphu elwa neentsholongwane kwaye siqinisekisa ukuba ukhuseleko, njengoko ilawulwa yimithetho esebenzayo kunye nemimiselo.
1 Imaski yezemidlalo
1.1 Iimaski zeRAW
1.2 Iimaski ezinophawu
2 Iimaski zokunxiba
2.1 Iimaski ezingama-226
2.2 Ifestile yomoya
2.3 I-Mymask, iSilbon, iTiffosi, iBuff
3 Yintoni ekufuneka ithathelwe ingqalelo xa uthenga imaski?
Iimaski zemidlalo zezona zithengisa kakhulu, mhlawumbi ngenxa yokuba bhetyebhetye okukhulu, uyilo okanye ubume babo obuthambileyo obenza ukuba kube lula kwaye bekhululekile ukunxiba kwaye, ewe, banokuphefumla.
Olu hlobo lwesigqubuthelo sobuso Banesixhobo sokucoca ulwelo esinefuthe lokulwa neentsholongwane. Ziyilelwe ngenjongo yokukhusela okona kulungileyo. Zilungele abantu abadala kwaye ziyilelwe i-ergonomic. Ziyakwazi ukuhlanjwa ukuya kumaxesha angama-20 kwaye ukwakheka kwayo ngumqhaphu kunye nepolyester. Ingaphakathi ikwayi-100% yomqhaphu ophathwayo kwaye inyangwa nge-AEGIS antimicrobial.
Ukubheja kweAdidas kuyilo lwayo kwaye inyani kukuba ziyamangalisa. Zithambile kwaye ziyaphefumla, iyalungelelanisa noyilo olukhulu kubume bobuso, zigubungele ngokuchanekileyo amacala ayo. Ziyahlambeka kwaye zisetyenziswe yonke imihla.
UReebok ukwalandela ingqikelelo efanayo yoyilo. Ezi ntlobo zimbini zivelise iimaski zazo nge-93% iphinda iphinda yenziwe i-polyester kunye ne-7% ye-elastane kwaye kufanele kuqatshelwe ukuba zonke azithathelwa ngqalelo ngonyango, kodwa ziyanceda ukuthintela ukuhanjiswa kwamathontsi okuphefumla.
UDecathlon naye wenza ukuba asayine ngemaski yezemidlalo ngokubamba okwahlukileyo. Inika inqanaba elifanelekileyo lokuphefumla kwaye lenzelwe abantu abadala kunye nabantwana abangaphezulu kweminyaka eli-10 ubudala.
Zizifihla loo nto unikeze ukhuseleko kunye nokuchasana, ilungele ukusetyenziswa kwemihla ngemihla kunye nezemidlalo ngenkqubo efanelekileyo yokungenisa umoya kuyo. Banenkqubo yokuqinisa eyahlukileyo kuleyo yemveli, kuba yenziwe ngamabhanti amabini erabha aya kuthi nca emva kwentloko engezantsi nangaphezulu kweendlebe, hayi phakathi kwabo. Ziyahlambeka kwaye zibambe ukuya kuthi ga kumasinki angama-70. Uluhlu lwayo lwangaphandle lwenziwe ngamanzi-ipholiyesta microfiber tatefan egxotha ulwelo.
Ezi maski zenziwe ukubheja uyilo olukhethekileyo olukholisayo kunye nokukhusela. Zenziwe ngamanqanaba amathathu okhuselo, ngelaphu eligxotha amanzi eligxotha ulwelo kunye nokwakhiwa kwe-80% ye-polyester kunye ne-20% ye-elastane.
I-Mymask, iSilbon, iTiffosi, iBuff
Iivenkile ezikwi-Intanethi. Banikezela ngeyona ndlela yoyilo ilungileyo yokuba unxibe ngobuhle. Zonke zisebenza ngokuhluza ibacteria, zilungelelanise ngokukhuselekileyo ukumila kobuso kwaye zinokuhlanjwa. I-Buff ikhethe imaski enoyilo olwahlukileyo kunye nokwakheka, inezinto ezinokucoca nge-98% yeebhaktiriya ezifanelekileyo kunye nesithako esisebenzayo: i-titanium dioxide kunye ne-chloride yesilivere ukukhusela ingaphakathi lengubo yemaski.
Yintoni ekufuneka ithathelwe ingqalelo xa uthenga imaski?
Kufuneka kuqatshelwe ukuba olu hlobo lweemaski ezicocekileyo luyilelwe ukuba luncedise kwindlela onxiba ngayo kwaye ayizizo iimaski zococeko okanye zoqhaqho. Zenziwe njengezincedisi kumanyathelo okuhamba emzimbeni kunye nococeko.
Kungenxa yoko le nto uninzi lwabo luza neelebheli zokuba ukuhlangabezana noxanduva lwezempilo, ekubeni abaninzi beboleka ukuze bayizalisekise.
Ayizizo zonke iimaski zelaphu ezinomgangatho ofanayo wokuhluzaKulungile ukuba ngaphakathi kokwenza kwayo okungenani kube nakho Maleko 3 izinto ezahlukeneyo. Ilaphu elikufutshane nomlomo kukhethwa ukuba ibe ngumqhaphu, kuba ibhetele iwagcina onke amasuntswana kunye namathe.
Ilaphu langaphandle kufuneka lenziwe nge-polypropylene kuba yeyona ifana nale isetyenzisiweyo kwiimaski zotyando. Ukongeza, lo mbandela wenza into efanelekileyo yokugxotha amanzi.
Kwimeko apho inokuphinda isebenze, Kufuneka uchaze inani lokuhlamba kunye neqondo lobushushu ukwazi ukuba zingaphi ezinokuthi zithotyelwe, kuba uninzi lwazo luphulukana nenxalenye yamacandelo okanye ukomelela ukuba ukusetyenziswa kwazo kugqithile. Eyona nto ilungileyo kukubahlamba yonke imihla emva kokusetyenziswa kunye nakumaqondo obushushu angama-60 °.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Iimaski zamadoda